Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 4
Nepali New Revised Version, Job 4
1 तब एलीपज तेमानीले जवाफ दिए:
2 “यदि कसैले तपाईंसित कुरा गर्ने आँट गर्‍यो भने, के तपाईं अधीर बन्‍नुहुन्‍छ? तर को नबोली बस्‍न सक्‍ला?
3 सम्‍झनुहोस्‌, तपाईंले कसरी धेरैलाई शिक्षा दिनुभयो, निर्बल हातलाई तपाईं कसरी बलिया पार्नुभएको छ।
4 ठक्‍कर खानेहरू तपाईंका वचनले सह्मालिए, र तपाईंले निर्बल घुँड़ाहरूलाई बल दिनुभयो।
5 तर अब सङ्कष्‍ट तपाईंमाथि आइलाग्‍यो र तपाईं निरुत्‍साहित हुनुहुन्‍छ। यसले प्रहार गर्दा तपाईं हरेस खानुहुन्‍छ।
6 के तपाईंको धर्म नै तपाईंको निम्‍ति भरोसा र तपाईंको निर्दोष जीवन तपाईंको निम्‍ति आशा हुनुपर्दैन र?”
7 “किनभने सोच्‍नुहोस्‌: कुनै निर्दोष मानिस कहिल्‍यै नाश भएको छ? सोझो मानिसले कहाँ कष्‍ट पाएको तपाईंले देख्‍नुभएको छ?
8 मैले देखेको छु, कि अधर्म जोत्‍ने र दु:ख छर्नेहरूले, आफैले छरेको कुराको कटनी गर्छन्‌।
9 परमेश्‍वरको सासले तिनीहरू ध्‍वंस हुन्‍छन्‌, र उहाँको क्रोधको रापले तिनीहरू नष्‍ट हुन्‍छन्‌।
10 सिंहहरू गर्जून्‌ र घुरून्‌ तापनि ठूला सिंहहरूका दाँत भाँचिन्‍छन्‌
11 शिकारको अभावले सिंह मासिन्‍छ, अनि सिंहनीका डमरुहरू छरपष्‍ट हुन्‍छन्‌।
12 “एउटा कुरा सुस्‍त-सुस्‍त मेरो कानमा आयो, र त्‍यसको कानेखुसी मेरो कानले सुन्‍यो।
13 रातका बेचैन सपनाहरूमा, जब मानिसहरू घोर निद्रामा परेका हुन्‍छन्‌,
14 त्रास र थरहरीले मलाई पक्रे, र मेरा हाड़हरूलाई कमायो।
15 एउटा आत्‍मा मेरो छेउ भएर गयो, र मेरो शरीरको रौँ खड़ा भयो।
16 त्‍यो रोयो, तर त्‍यो के हो मैले ठम्‍याउन सकिनँ, एउटा आकार मेरो आँखाअघि खड़ा भयो। यसो भन्‍ने एउटा मधुर सोर मैले सुने–
17 ‘के मरणशील मानिस परमेश्‍वरभन्‍दा बढ़ी धर्मी ठहर्न सक्‍छ? के कुनै प्राणी आफ्‍ना सृष्‍टिकर्ताभन्‍दा पवित्र हुन सक्‍छ?
18 यदि परमेश्‍वरले आफ्‍नै सेवकहरूमाथि भरोसा गर्नुभएन भने, र आफ्‍नै दूतहरूलाई भूल गरेको दोष लगाउनुभयो भनेता,
19 माटोका घरमा बस्‍नेमाथि झन्‌ बढ़ी दोष किन भेट्टाउनुहुन्‍न? जसको आधार ता धूलो नै हो, जो सानो पुतलीझैँ कुल्‍चीमिल्‍ची पारिन सकिन्‍छ,
20 तिनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्‍म चकनाचूर पारिन्‍छन्‌, कसैले थाहा नपाई तिनीहरू नाश हुन्‍छन्‌।
21 के तिनीहरूका पालका डोरीहरू माथि तानिएका छैनन्‌ र? यसरी तिनीहरू ज्ञानविना नै मर्छन्‌?’
Job3Choose Book & Chapter Job 5